Benjamin BRIGGS (1837 – 1914) | FJKM Ambonin'Ampamarinana
Teraka tany Idle. Yorkshine England izy ny 25 Aogositra 1837. Tanora dia efa nandre ny antson’ny Tompo hitory ny filazantsara any amin’ny tany maizina. Niomana tao amin’ny Kolejin’i Airedale izy. Nanambady an’i Elisabeth Teale, ary nanan-janaka. Nalaza teto Ambonin’Ampamarinana Rafara Briggs zanany.
Tonga misionera LMS teto Madagasikara tamin’ny 11 Jona 1864 ary voatendry (ny 5 Oktobra 1864) hiadidy ny Fiangonana teto Ambonin’Ampamarinana efa nisy tamin’izay fotoana izay. “Nitaona olona maro ho an’i Kristy.” Niadidy ny Fiangonana, 92 zana-piangonana amin’Ambonin’Ampamarinana
Sady misionera no mpitandrina teto izy tany am-boalohany. Nanorina karazana sekoly teolojika teto namoaka mpitandrina maro. Niezaka niaraka tamin’ny Fiangonana nanorina ny tranovato ho fahatsiarovana ny maritiora 14 mianadahy navarina teto Tsimihatsaka ny 28 Marsa 1849. Nisy moa ireo fiangonana tranovato efatra, iray amin’izany Ambonin’Ampamarinana, naorin’i William Ellis.
Nitsinjo sy namonjy ny zanany ara-panahy marobe teto Madagasikara izy. Misionera hany naharitra, tsy niala teto Ambonin’Ampamarinana sy ny distrikany. Laniny teto ny heriny sy ny fahatanorany. Aina marefo sy fahasalamana tahina sisa no nentiny nody tany an-tanindrazana tamin’ny faha-65 taonany. Nisy ireo misionera nanohy ny asa raha naka rivotra izy ary raha tsy teo intsony koa izy. Nodimandry tamin’ny 23 Marsa 1914 B. Briggs. Nitondra ny Fiangonana teto nandritra ny 39 taona.
B. Briggs (1864 – 1904), J Peill (1873 – 1879)
W Evans (1908 – 1936)
Taorian’izany dia ny mpitandrina Malagasy teto Ambonin’Ampamarinana no nitondra ny distrika.